News Collection: मौलाउँदै यौन व्यवसाय
मौलाउँदै यौन व्यवसाय
हरेक वर्ष पाँच सय यौनकर्मी बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
उपत्यकामा मात्र आठ हजार यौनकर्मी सक्रिय छन् । यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूका अनुसार देशभर यो संख्या तीस हजारभन्दा बढी छ ।
यौनकर्मीहरूमा चेतना जगाउने उद्देश्यले स्थापित कम्युनिटी एक्सन सेन्टर (सिएसी नेपाल) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा काठमाडौंमा पाँच हजार ५५ यौनकर्मी रहेको पाइएको हो । ती यौनकर्मीका आठ हजार तीन सय ८९ नियमित ग्राहक रहेका छन् । यस्तै भक्तपुरमा एक हजार ७९ यौनकर्मी र तिनका ग्राहकहरू एक हजार नौ सय ४४ रहेका छन् । हरेक वर्ष पाँच सय यौनकर्मी बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
एक यौनकर्मीबराबर २० जना ग्राहक सम्पर्कमा आउने गरेको अनुमानका आधारमा ग्राहकको संख्या निर्धारण गरिएको हो । सिएसी नेपालका क्लिनिकहरूमा नियमित आउने गरेका र सिएसीका फिल्ड मोबिलाइजरसँग गरिएको सम्पर्कका आधारमा सक्रिय यौनकर्मीको संख्या अनुमान गरिएको सो संस्थाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय यौन रोग तथा एड्स नियन्त्रण केन्द्रले अक्टुबर २०१० मा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा हालसम्म आठ सय ८१ यौनकर्मीलाई एड्स लागेको र तीमध्ये आठ सय ७४ महिला र सातजना पुरुषसमेत रहेको दाबी गरिएको छ । पतिबाट हेपिएका, युद्धबाट विस्थापित भई काठमाडौंमा आई शरणार्थीझैँ जीवन बिताएका, गरिबीले थलिएका, बालबच्चा पढाउन नसकी समस्यामा परेका महिला यस क्षेत्रमा बाध्य भएर संलग्न हुने गरको पनि सिएसी नेपालले जनाएको छ । यौन क्षेत्रमा लाग्नेहरू १६ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका पाइएको छ । यस्ता यौनकर्मीलाई सिएसीले निःशुल्क कन्डम वितरण, रक्तपरीक्षण र निःशुल्क औषधि प्रदान गर्ने गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुमानमा यौन क्षेत्रमा लागेका महिलामध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत महिलामा यौनरोग लागेको हुन्छ । कन्डम प्रयोग गर्दा एड्स सर्ने सम्भावना नभए पनि यौनांगमा रहने गरेका मुसा र जनैखटिराजस्ता यौनरोग भने कन्डम प्रयोगबाट पनि सर्ने सम्भावना रहन्छ । 'हामीले यौनकर्मीलाई सुरक्षित यौनसम्पर्कका लागि प्रोत्साहित गर्ने गरेका छौँ । यसका लागि हामीले विभिन्न किसिमका चेतनाका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ,' सिएसी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक तुलसालता अमात्य भन्छिन्, 'यौनकर्मी महिला दिदी-बहिनीको बाध्यता पनि बुभ\_mनुपर्छ । उनीहरूलाई घृणा गरेर, दुःख दिएर यो समस्याको समाधान हुँदैन । उनीहरूलाई वैकल्पिक आयआर्जनको काम दिन सक्यौँ भने उनीहरू यो पेसा छोड्न तयार हुन्छन् ।'
यौनकर्मीलाई चेतना नजगाई यस क्षेत्रलाई वैधता दिन नहुने तर्क पनि अमात्य गर्छिन् । 'म यो क्षेत्रलाई वैधता दिनुभन्दा पनि यस क्षेत्रमा संलग्न यौनकर्मीलाई जागरुक बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु,' अमात्य भन्छिन् । उता, यौनकर्मीहरू भने आफूहरू राज्यबाटै हपिएको बताउँछन् । आप\_mना कुराहरू कसैले नसुन्ने र सबैले घृणा गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । 'हामीसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले हामीलाई रानी ठान्छन्, तर बाहिर गएर भने घृणा गर्छन् । के हामी मान्छे होइनौँ ?' सिएसीको सम्पर्कमा आएकी एक यौनकर्मी यसरी दुखेसो पोख्छिन् ।
छोराछोरी पाल्न ग्राहक नखोजी हुँदैन
रिमा नेपाली (नाम परिवर्तन) सिन्धुपाल्चोक
श्रीमान्ले सौता ल्याएपछि यो पेसामा लाग्नु मेरो बाध्यता भयो । गाउँमा बस्न सकिनँ । गाउँकै एकजना दाजुसँग म काठमाडांै आएँ । ती दाजुले नै सुरुमा मेरो सतित्व लुटे । त्यसपछि उनले मलाई एउटा गलैँचा कारखानामा काम गर्न राखिदिए । त्यहाँको मालिकले ममाथि शोषण गर्न थाल्यो । साथीहरूसँगको संगतमा लागेँ । साथीहरू पनि त्यस्तै रहेछन् ।
पहिलोपटक म सय रुपैयाँमा बिक्री भएँ । त्यो रुपैयाँ पनि मेरो लागि धेरै थियो । मेरा दुईजना छोराछोरी छन् । ती छोराछोरीलाई पाल्न पनि म यो क्षेत्रमा नलागी हुँदैन । मलाई थाहा छ, मैले गरेको काम राम्रो होइन, तर छोराछोरीलाई पाल्न मैले ग्राहक नखोजी हुँदैन ।
म एड्सदेखि सचेत छु । तीन-तीन महिना रगत चेक गराउँछु र कन्डमविना मरिकाटे पनि सम्पर्क गर्दिनँ । अब त मेरो उमेर पनि बित्न थालिसक्यो । ४० नाघिसकेँ । अब कति समयसम्म यो काम गर्ने ? एकजना ग्राहकसँग पाँच सय रुपैयाँसम्म लिने गरेकी छु । म आफैँ ग्राहक त खोज्दिनँ । होटेलवालाहरूले ग्राहकसँग सम्पर्क गरेर बोलाएपछि जाने गर्छु । मैले गरेको यो कामबारे मेरा साथी, परिवार र श्रीमान्ले थाहा पाउँछन् कि भनेर सधैँ डर लाग्छ ।
अब हामी पनि संगठित हुनुपर्छ
मन्दिरा शर्मा (नाम परिवर्तन) नुवाकोट
प्रहरीले बर्दीमै हामीलाई शोषण गर्छन् । तर, तिनै प्रहरीले वेश्यावृत्ति भयो भनेर हामीलाई पक्राउ गर्छन् । हाम्रो अधिकार खोई ? के हामी मान्छे हाइनौँ ? प्रहरीले बर्दीमै एकजना साथीलाई शोषण गरिरहेको दृश्य मैले मेरो मोबाइलमा खिचेर राखेकी छु ।
हामी आफ्नै इच्छाले बिक्री हुँदा अपराध गरेको ठहर हुने, तर प्रहरीले जबर्जस्ती हामीलाई गर्दा केही नहुने ? हामीले कसैको केही बिगारेका छैनौँ । कसैको श्रीमान् खोसेका छैनौँ र कसैको घरबार बिगारेका पनि छैनौँ । कसैले हामीलाई प्रयोग गरेर पनि पैसा दिँदैन । त्यो पनि सहन्छौँ । रत्नपार्कमा एकजना महिला यौनकर्मीलाई त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले नांगै बनाएर कुटपिट गरे । त्यस्तो अत्याचार पनि हामीले सहनुपर्छ ।
त्यसकारण यौनकर्मी महिलाहरू अब संगठित हुनुपर्छ र आप\_mनो अधिकार खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । सरकारी अधिकृतहरू हाम्रा ग्राहक हुन्छन्, तर उनीहरू बाहिर गएर आफैँ विकृत भयो पनि भन्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्र देखाउँदा मलाई घृणा लाग्छ ।
बिए पास गरिसकेकी छु
सिर्जना मगर (नाम परिवर्तन) बुटवल
हुन त म क्याम्पसमा पढ्छु । बिए पास गरिसकेकी छु । यस्तो काम गर्नुहुँदैन भन्ने थाहा छ । तैपनि पैसाका लागि यस्तो गर्नुपर्छ । अरूले झैँ पैसा पाउनेबित्तिकै आफूलाई सुम्पन्न । केटा मन पर्‍यो भने र पैसामा पनि चित्त बुभ\_mयो मात्र भने उसले भनेको गर्छु । मलाई यस्तो गर्न सिकाउने एकजना केटा साथी हो । त्यसलाई म कहिल्यै बिर्सन्नँ । उसले मलाई धोका दियो । अहिले त मैले गरेको फोनसमेत उठाउँदैन । मलाई बिहे गर्छु भनेर जे पनि गर्‍यो, तर बिहे गरेन ।
त्यो केटासाथीको संगतले यस्तो बानी पर्‍यो । पछि यस्तै-यस्तै काममा लाग्न थालेँ । कहिलेकाहीँ त रातभर रुन्छु । मेरा बुबाआमाले थाहा पाए भने के गर्लान् भनेर निकै डर लाग्ने गर्छ । केटाहरूले मलाई देख्नेबित्तिकै कति राम्री भन्छन्, मरिहत्ते पनि गर्छन् । तर, उनीहरूको चाहना भने उही हो । बिहेको कुरा गर्ने हो भने भाग्न खोज्छन् ।
अब कसले गर्छ होला मलाई बिहे ? यदि बिहे गरे पनि म यस्तो केटी हुँ भन्ने थाहा पाएपछि उसले मलाई छोड्छ होला । तर, मेरो चाहना भने बिहे गरी घरजम गर्ने र यो पेसा छोड्ने हो ।